Transit Line Kuongorora-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Our Services>Lift Inorema>YeTransit Line Kuongorora
Kusarudzwa kwenzira kwakakosha pakutakura zvinotakura zvinhu.
Iyo nzira yakagadziridzwa inoderedza mutengo wekufambisa, kuderedza njodzi inogona kuderedzwa, inoderedza zvipingamupinyi inobata uye inove nechokwadi chekuchengetedza, kuvimbika uye kurongeka kwekufambisa kwekutakura zvinhu kusvika pakukwira kwakanyanya. Uye kiyi yekusarudzwa kwenzira iri mune yekutanga nzira yekutsvagazve, ndiko kuti, iko kuongororwa uye kuyerwa kwenzira dzakasiyana.
1.Sarudza dzimwe nzira dzinoenderana nechiitiko. Tarisa uone nezvekufambisa chinhambwe uye kutaridzika kwekutyaira kwemotokari.
2.Actual kuongororwa uye kuyerwa kwedzimwe nzira (dzakapedzwa nekambani yekufambisa). Munguva yekuferefetwa, zvakafanira kuti uongorore bhiriji, kukwirira kwechimiro, chipingamupinyi, kutendeuka radius, yakarondedzerwa maratidziro edziviriro yezvipingamupinyi zvingangodaro uye pfupiso yezvipingamupinyi zvese munzira inopfuura yeimwe nzira.
3.Summarize dzimwe nzira uye ita kuongorora uye kufananidza. Zvinoenderana neparamende yekutanga yedzimwe nzira, paramita rose rakarongedzwa uye rakapfupikiswa kuti vaone zvakakanganisa zvipingamupinyi zvinogona kukanganisa kufamba. Kana zvichikwanisika, unodikanwa kuti uongorore zvipingaidzo munzira zvekare.
4.Sarudza yakarondedzerwa nzira yekudzokorora nzira. Sarudza nzira yakatsanangurwa zvinoenderana neyakafupiswa paramita dzedzimwe nzira, dzakasanganiswa neicho chaiyo chekufambisa uye chirongwa, uye ita danho rinotevera rekutsanangudza nzira yekudzokorora maererano nesimboti yekuremerwa kutakura zvinotakura kutakura.
5.Conduct yakadzokorodza nzira yekudzokorora. Basa guru rinosanganisira kuverenga mitoro yemitoro yebhiriji, uremu huwandu hwemugwagwa; kuratidza zvese zvipingamupinyi; Kutsanangura mhando dzemvumo dzinodikanwa pakufambisa uye kutsvaga mhinduro dzezvipingamupinyi zvese.
6.Road zvipingamupinyi clearance bhajeti. Budget yemutengo wakazara wekujeka uchibva pamhedzisiro yenzira yakadzokororwazve yekubvunzurudza uye chikumbiro chemvumo
7.Inyorera chetatu rezinesi retifiketi yemugwagwa reconnaissance mushumo.
Zvinoenderana nezvinodiwa nehurumende yemuno nemaitiro akajairwa, kana zvichidikanwa, simbisai mushumo wekutsvaga mugwagwa nesangano rakabatana neChitatu kutanga.
8.Apply kune Road Road Bhizinesi Rezenesi yehurema cargos.
Zvinoenderana nemitemo yemunharaunda nemirairo, shandisa Road Road Bhizinesi rezenisi dzeorema cargos nezvinyorwa zvinoenderana